Baro dhisida marawaxadaha dabaysha talaabo talaabo | Cusbooneysiinta Cagaaran
Waa suurtagal inaad waligaa rabto inaad ku dhejiso gurigaaga tamarta la cusboonaysiin karo oo aadan go'aansan sababtoo ah qiimaha iyo kharashka maalgashiga. Amni darrada maalgelinta wax aadan ogeyn haddii ay kuu keeneyso dheefo waa wax ay adag tahay in lala qabsado. Si kastaba ha noqotee, halkan waxaan maanta kuugu keenaynaa xalka dhibaatooyinkaaga. Haddii aadan maal gashan karin, maxaad adigu u sameyn weyday tamar la cusboonaysiin karo? Qodobkaan waxaan ku baraynaa sida guriga tamartiisu ugu jirto. Si tan loo sameeyo, waxaan arki doonnaa sida loo dhiso tallaabo tallaabo marawaxadaha dabaysha ee guriga lagu sameeyo.
Ma rabtaa inaad wax walba ka barato? Akhriso si aad u ogaato.
1 Samee marawaxadaha dabaysha ee guriga lagu sameeyo
2 Qalabka U Baahan Yahay
3 Isku soo wada duub kaluumeyaasha
4 Ku shaqeynta marawaxadaha dabaysha ee guriga lagu sameeyo
Samee marawaxadaha dabaysha ee guriga lagu sameeyo
Kuwa aan si fiican u aqoon waxa ay tahay marawaxadaha dabaysha, waa koronto-dhaliye ka shaqeeya xoogga dabaysha. Waa aalad leh aalado sida kuwa marawaxadaha oo kale oo ay dhaqaajiso xawaaraha ay ku socoto dabayshu oo awood u leh inay wax ka beddesho Tamarta jirka tamarta korontada si aan ula kulanno dalabkeena.
Sidaad u aragto, ma aha tamar wasakhaysa, markaa waxay gashaa adduunyada la cusboonaysiin karo iyo horumar waara. Tan, waxaan ku darsan karnaa hadhuudhkeena ciidda adduunka ee dib-u-cusbooneysiinta iyada oo aan la bixin kharashyada maalgashiga iyo amni-darrada ugu horreysa ee ku soo duulaysa qof kasta oo isku daya inuu ku abuuro gurigiisa tamar la cusboonaysiin karo.
Waxaas oo dhan, waxaan u soconeynaa talaabo talaabo anagoo sharxeyna waxa ay u baahan tahay in la dhiso.
Qalabka U Baahan Yahay
Dhismaha marawaxadaha dabaysha ee guriga lagu sameeyo waxaan u baahan doonaa qalabka caadiga ah ee aan ka helno aqoon isweydaarsiga. Intaas waxaa sii dheer, waxaan u baahan doonnaa walxaha arc, oo aan isticmaali doonno in la sameeyo qaansoleyda iyo barroosinku waxay noqon doonaan birqaade iyo sharaf, taas oo loo adeegsado in si ka sii saxan loo gooyo matoorrada marawaxadaha dabaysha ee guriga lagu sameeyo.
Mid ka mid ah qaybaha muhiimka ah ee ay tahay inaan isticmaalno waa beddelaha. Beddelka gawaarida ayaa ku habboon in la dhiso marawaxadaha dabaysha ee guriga lagu sameeyo. Qalabka ugu muhiimsan waa seddexdan: kuwa wax kiciya, kuwa badala iyo dabcan dabaysha. La'aanta xoogga dabaysha ma haysanno nooc tamarta korantada ah.
Waxa ugu badan ee lagula taliyaa waa bedelida gaari xamuul ah ama la mid ah. Si kale haddii loo dhigo, waxa ugu muhiimsan waa cabbirka. Markuu baddelaha badalaa, ayaa ka sii fiican. Maaddaama beddele kasta uu leeyahay qalooc dabeecad leh, waxaan garan karnaa qiyaasta ay leedahay. Sidan ayaa ah sida aan u raadin doono beddelkaas tartiib tartiib ah waxaanna ku dari doonnaa isku dhufasho mahadsanid jibbaar weyn oo aan ku dhejin doonno mashiinka iyo mid yar oo aan ku dhejin doonno beddelaha. Sidan waxaan ku xaqiijin doonnaa in dabayshu u dhicin si adag si ay u bilawdo soo saarista koronto.
Waa lagama maarmaan in si fiican loo ogaado isticmaalka guriga lagu qabanayo iyo in la raadiyo in wax ka badan laga soo saaro waxa loogu yeero cunsuriyada. Waxay ku saabsan tahay Istaagga agabyo badan oo leh Laydh, sida telefishanka.
Ka soo qaad haddii aan diyaarinay marawaxadayada dabaysha ee guriga lagu sameeyo maalin leh dabayl yar. Waa inaan aragnaa inta tamarta ay mashiinka dabayshu na siinayso nidaam dabayl yar si loo dammaanad qaado. Kama rajeyn karno isticmaalkayaga tamarta maalmahaas oo ay dabeyl badan jirto, maxaa yeelay ma ogaan doonno goorta ay noqon doonaan.
Isku soo wada duub kaluumeyaasha
Waxaan qeexeynaa sida loo soo uruuriyo cunsurka labaad ee muhiimka u ah marawaxadaha dabaysha ee guriga lagu sameeyo, kuwa wax kiciya. Waxaa jira noocyo badan oo marawaxadaha dabaysha oo leh noocyo kala duwan oo matoorro ah. Waxa jira kuwa la shaqeeya laba, saddex iyo ilaa afar ama in ka badan oo ah kuwa wax kiciya. Tani waxay kuxirantahay gebi ahaanba xawaaraha dabaysha aaga aan ku nool nahay. Beddelaha la isticmaalay ayaa sidoo kale go'aamin doona tirada matoorrada.
Haddii aan u adeegsanno qalabka wax lagu kiciyo aerodynamic profile, waxaan ku lahaan karnaa waxqabad wanaagsan xawaare sare laakiin waxaan yeelan doonnaa awood aad u yar oo bilow ah. Taas macnaheedu waxa weeye inaanaan ka faa'iideysan doonin korontada ay dabeylaha daciifka ahi na siiyaan. Waxa ay tahay inaan maskaxda ku hayno ayaa ah, haddii nidaamka dabaysha ee aaggaaga uu yar yahay, in loo baahdo wax soo saarayaal badan si loo magdhabo.
Si loo sameeyo kuwa wax kiciya, waxaan ka faa'iideysan doonnaa tuubooyinka PVC ee loo isticmaalo tuubbooyinka. Waa kuwo qaali ah, tiro badan, iyo qaybo dayactir ah ayaa la samayn karaa wakhti kasta. Faa'iidada muhiimka ah ee tuubooyinkan ayaa ah inay durbaba qalloocan yihiin, sidaa darteed ma jiri doonaan wax dhibaato ah oo soo saareyaasha sameeya. Goynta, waxaa fiican inaad isticmaasho Blades goynta Dremel iyo PVC si loo sii saxo markii la jarayo.
Hadda waxaan u baahan doonaa inaan dooranno qalabka saxanka qalabka wax lagu duubo. Waxa ugu fiican ee lagu bilaabi karo waa saxan wareegsan oo alwaax ah oo aan ku kala wareejin doonno qalabka wax kiciya. Qaabkan waxaan wax uga beddeli karnaa naqshadda marawaxadaha dabaysha wakhti kasta adoo ka saarayna oo ku rakibayana qalabka wax lagu kiciyo. Markaad si cad u qeexdo naqshadda aad rabto inaad ku guuleysato, waxaad ka iibsan kartaa aluminium CNC si aad ugu xirto suunka gudbinta.
Ku shaqeynta marawaxadaha dabaysha ee guriga lagu sameeyo
Xeedho batari raqiis ah ayaa loo isticmaali karaa in lagu sameeyo isku xirnaanta korantada. Waa muhiim inaad iibsato baytariyaal wanaagsan oo naga caawin doona inaan keydinno tamarta ugu badan ee suurtogalka ah.
Waxa noo hadhay waa inaan dhisno buurta lagu rakibo marawaxadaha dabaysha. Tan awgeed, waxaan u adeegsannaa tiirarka birta ee birta ah ee loo isticmaalo rakibidda anteenooyinka. Waxaad u isticmaali kartaa xargaha qaar si aad ugu xirto si uusan u dhaqaaqin marka ay jirto dabayl daran. Fiilooyinka loo adeegsaday rakibida waxaa lagu ridi karaa tuubada gudaheeda si aysan ugu nabaad-guurin nabaad-guur ama ay u waxyeeleeyaan cimilada.
Kordhinta turre this waa in lagu sameeyaa saldhig pivoting ah. Adoo dul dhigaya shandad dabada ah, waxay awoodi doontaa inay u jahaysato dhanka dabaysha dhibaato la'aan waxayna suurto gal noqon doontaa inaad yeelato tamar badan isla dabaysha.
Waxaan rajeynayaa in talooyinkaan aad ku dhisi kartid marawaxadaha dabaysha ee guriga lagu sameeyo. Gelitaanka adduunka ee la cusboonaysiin karo marwalba waa ikhtiyaar wanaagsan. Marka laga reebo inaad tahay tamar dhaqaale, waxaad gacan ka geysan doontaa yareynta wasakheynta iyo xaalufinta kheyraadka dabiiciga ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Kaydinta tamarta » Dhaqaalaha Guriga » Marawaxadaha dabaysha ee guriga lagu sameeyo